Ho vita amin’ny aogositra ny asa: famatsian-drano vaovao eny amin’ny By Pass | NewsMada
Ho vita amin’ny aogositra ny asa: famatsian-drano vaovao eny amin’ny By Pass
Mikaroka ny vahaolana rehetra hanampiana ny famatsian-drano eto an-dRenivohitra sy ny manodidina ny fanjakana. Anisan’izany ny fotodrafitrasa vaovao eny amin’ny By Pass, hisahana ny tapany atsinanan’Antananarivo.
Nitsidika ny toerana hanorenana toby famatsian-drano vaovao eny Amoron’Akona, manamorona ny By Pass, ny sekretera jeneralin’ny governemanta, Rtoa Razanadrainiarison Rondro Lucette, omaly maraina. Nojereny ny fandrosoan’ny asa fanamboarana, eo ambany fiahian’ ny minisiteran’ny Angovo, ny rano ary ny akoranafo, miara-miasa amin’ny Jirama.
Tafiditra ao anatin’ny tetikasan’ny governemanta ato anatin’ny fohy ezaka, hanampiana sy hanitarana ny famatsian-drano tantanin’ny Jirama eto an-dRenivohitra sy ny manodidina ity asa atao eny amin’ny By Pass ity. Anisan’ny hahazo famatsiana amin’ity siniben-drano ity ny eny amin’ny faritr’Ambohimangakely sy ny tapany atsinanan’ny Renivohitra sy ny manodidina. Heverina hamahana ny olana ato anatin’ny fotoana fohy ity fanamboarana fotodrafitrasa ity. Vinavinaina ho vita amin’ny faran’ny volana aogositra ho avy izao ny asa rehetra.
Hitarina any amin’ny faritra hafa
Nentanin-dRtoa sekretera jeneraly ny tompon’andraikitra mitantana ny tetikasa hahavita hatramin’ny farany sy ara-potoana ny asa. “Inoana fa tena hitondra voka-tsoa mivaingana amin’ny fiainam-bahoaka ity fotodrafitrasa vaovao ity, ary hitarina any amin’ny faritra rehetra eto an-dRenivohitra raha toa ka mahomby”; hoy ihany izy.
Anisan’ny manana olana amin’ny famatsian-drano koa ny tapany andrefan’Antananarivo, toy ny eny Itaosy sy ny manodidina, ary efa maminavina mikaroka vahaolana amin’izany ny fanjakana sy ny governemanta.
Efa misy koa ny siniben-drano naorina eny Ankadivoribe, ary andrasana ny tena fahavitany sy ahafahany miasa, hamahana ny tsy fahampian’ny famatsian-drano eny amin’ny tapany atsimon’Antananarivo, toy ny eny Iavoloha, Amboanjombe, Anjomakely sy ny manodidina.
Ho an’Avaradrano, efa misy ny siniben-drano vaovao eny Ambatofotsy.